बडी सेप टोन गरी सेपअप बडी - प्रश्नोत्तर - प्रकाशितः जेष्ठ ११, २०७५ - नारी
भेला सेप मेसिन के हो ?
यो कोरियन इक्विपमेन्ट ब्रान्ड हो । यसले क्याबिटेसन गर्छ, बोसो फुटाइ दिन्छ । यसको ७.७ एमजी भित्र गएर बोसो फुटाउनु हो ।
धेरैजसो स्लिमिङ सेन्टरमा गएर दुब्लाएकाहरू फेरि मोटाउने गुनासो प्रशस्तै सुनिन्छ, यहाँ केही
फरक छ कि ?
ओभरवेटलाई नर्मल वेटमा ल्याउने हो । त्यसपछि हामी फुड हेबिट तथा डाइट प्लानको क्लास लिन्छौं । यदि फुड ह्याबिट नै चेन्ज भयो भने पुन: मोटाउने सम्भव हुँदैन ।
यो थेरापीमा भोकै बस्नुपर्छ कि पर्दैन ?
यसमा भोकै बस्नु पर्दैन । हाम्रो डाइट चार्ट छ जसमा एक छाक ब्राउन राइस खान पाइन्छ ।
थेरापी कसरी गरिन्छ ?
बडी मास्क इन्डेक्स चेक गरेर उमेर, उचाइ, बढी फ्याट, वाटर लेबल, किड्नी बाहिरको फ्याट, प्रोटिन फ्याटको रेसियो, स्केलर फ्याट, हिप तथा वेस्टको रेसियो कति छ सबै चेक गरेपछि मात्र कुन पार्टमा कति घटाउनुपर्ने हो, हिसाब गरी सेवा उपलब्ध गराइन्छ ।
यो थेरापी कति समयको हुन्छ ?
१ महिना र १५ दिनको कोर्सको व्यवस्था छ । ४ दिनको एकपटक गर्दा महिना दिन र दैनिक गर्दा १५ दिनमै सकिन्छ जसमा तीन घन्टा र डेढ घन्टाको ट्रिटमेन्ट हुन्छ । यसबाट ५ देखि ६ केजीसम्म तौल घट्छ । प्रत्येक मेसिनमा १ देखि २ केजीसम्म घट्नेहरू पनि छन् तर यसलाई मेन्टेन गर्नेकुरा आफ्नै हातमा हुन्छ ।
वेट घटेर बडी लुज हुन समस्या कत्तिको आउँछ ?
ब्युटिफिकेशन स्पा सेन्टर, बालुवाटार
फाल्गुन ६, २०७३ - भ्रूणको लिंग पहिचान गरी गर्भपतन
पुस २४, २०७३ - पियर बडी सेप